tijaabiso faa'iidooyinka otomaatiga iyo faa'iido darrooyinka
Ugu Weyn Ee Otomaatiga Tijaabi Faa'iidooyinka otomaatiga iyo Faa'iido-darrooyinka
Tijaabi Faa'iidooyinka otomaatiga iyo Faa'iido-darrooyinka
Imtixaanka wada, marka si sax ah u samayn ku yeelan kartaa faa'iidooyin badan noqon doonaa mid aad waxtar u leh mashruuca iyo ururka. si kastaba ha ahaatee waxaa jira qaar ka mid ah dhacyada ama khasaaraha qalabaynta imtixaanka in aan u baahan nahay in laga war hayo.
Tijaabi Faa'iidooyinka otomaatiga
Maxay yihiin faa'iidooyinka Imtixaanka otomaatiga ah?
Xaqiijinta wixii la yaqaan
jeegaga iswada waa hab fiican ee xaqiijinaya in codsiga weli hawlaha si sax ah ka dib markii isbeddelkii ka dhigay inuu.
Waxaa macquul ah in marka feature cusub oo lagu daraa codsiga ama kutaan a go'an yahay, waxaa saamaynta shaqeynayaan ee software ka shaqeeya, i.e. a cayayaanka dhaca waxaa soo bandhigay.
By socda set oo ah jeegaga dhaca iswada marka codsiga la simay, waxaan tilmaami karaa wax kasta oo cayayaanka cusub soo bandhigay iyadoo ay sabab u isbedelada.
Macluumaadka muhiimka ah ee halkan waa in uu ordo jeegaga iswada sidii ay marar badan codsiga la casriyeeyay.
Looma baahna in la wado xirmooyinka buuxa ee jeegaga otomaatiga ah. Xirmada qiiqa degdegga ah ee qiiqa waa inay ku filnaato soo qaadista wixii arrimo waaweyn ah.
Jawaab deg deg ah
Faa'iidada kale waa weyn ee jeegaga iswada waa celinta deg deg ah aan helno marka codsiga la simay. Sida habboon kooxda horumarinta waa in ay toosiyaan wixii fashilaad sida ugu dhaqsaha badan inay soo sara kacaan, ka hor inta uusan u dhaqaaqin hawlo kale.
Fadlan ogow in jawaab celintaan degdega ah lagu gaari karo oo keliya tijaabooyinka unugyada iyo tijaabooyinka API. Haddii aan ka UI ama heerka nidaamka tijaabiyo shaqeynayaan, imtixaanada waxay qaadan kartaa waqti dheer si dhamaystiran.
Fulinta degdegga ah ee jeegagga
Jeegaga otomaatiga ah ayaa qaadan kara muddo si qoraal ah. Si kastaba ha ahaatee, markii aan u soo dejin waxay guud ahaan u soomi yihiin iyo tegi kartaa iyada oo loo marayo tallaabooyin kala duwan oo badan oo dhakhso badan aadanaha ah. Sidaa darteed, waxay ka caawiyaan bixinta jawaab celin dhakhsa leh kooxda horumarinta.
Tani waxay si gaar ah run ugu tahay dhacdooyinka dhacdooyinka xogta kexeeya.
Waqtiga tijaabinta ayuu fasaxaa
Isticmaalka ugu fiican ee jeegaga otomaatigga ah waa tijaabooyinka dib u noqoshada.
Automating dhaca imtixaamaa noo siidaysay waqtiga tijaabiyeyaal, si ay u dheeraad ah diiradda karaa baaritaanka iyo sahaminta of qaababka cusub.
Waxaa saas la mid, marka si fiican loo fuliyo, jeegaga iswada si toos ah ay maamusho karaa ugu yaraan ama kormeer lahayn ama faragelinta buugan.
Kooxda horumarinta ayaa wax ku darsan kara
jeegaga iswada waxaa sida caadiga ah ku qoran luqad la mid ah sida codsiga hoos imtixaanka. Sababtan awgeed, mas'uul ka ah qoraal ahaan, dayactirka iyo fulinta baaritaan uu noqdo mas'uuliyad la wadaago.
Qof kasta oo ka tirsan kooxda horumarka ayaa wax ku biirin kara, ma aha oo keliya tijaabiyayaasha.
Waa maxay faa'iido darrooyinka otomaatiga Imtixaanka?
Dareen been ah oo tayo leh
Ka taxaddar inaad ka gudubto imtixaannada! Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay xaqiijinta shaqeynta heerka UI ama nidaamka.
Jeeg otomaatig ah ayaa kaliya hubinaya waxa loo qorsheeyay in la hubiyo.
Jeegaga iswada ee Suite imtixaan si farxad gudbin karaan, laakiin waxaa jiri kara ayna duleella u weyn oo loo ogaanin. Sababta tani waa sababta jeegga iswada lama suntan inay 'eegno' fashilka kuwa.
Xalka: hubi inaad naqshadeyso xaalado tijaabo oo wanaagsan ka hor intaadan iyaga otomatig ah sameyn. Jeeg otomaatig ah wuxuu kaliya ugu fiican yahay naqshadeynta imtixaanka. Sidoo kale ku dar jeegaga otomaatiga ah imtixaanka gacanta / baaritaanka.
Aan lagu kalsoonaan karin
Jeegaga otomaatiga ah ayaa ku dhici kara arrimo badan awgood. Haddii jeeg iswada sii guuldareysteen ay sabab u tahay arimo kale oo badan cayayaanka dhab ah, waxay kor u qaadi kartaa digniin been ah.
Tusaale ahaan, jeegaga iswada jebin kartaa sababta oo ah isbedel UI ah, adeeg hoos isagoo ama dhibaatooyin la xiriira shabakada.
arrimaha Hadalladaasu ma aha kuwa si toos ah uga codsiga hoos imtixaanka laakiin saamayn karta natiijada oo ka mid ah jeegaga iswada.
Xalka: Halka ay suurogal tahay / ay khuseyso, isticmaal dabada. Stubs waxay ka adkaataa arrimaha la xiriira isku xirnaanta ama isbeddelada nidaamyada xisbiga 3-aad. Sidaa darteed, jeegaga otomaatigga ah ayaa ka madax-bannaannaan kara wax kasta oo guul-darrooyinka hoose.
Tijaabinta otomaatiga ma ahan tijaabo
Nasiib darrose, dad badan ayaa 'Tijaabinta otomaatiga' ku qalda Tijaabinta.
Marka ay haystaan ​​qalab ay u qalabayn imtixaanka, ay doonayaan in ay 'qalabayn oo dhan imtixaanada'. Waxay rabaan inay ka takhalusaan dhammaan 'tijaabiyeyaasha gacanta'.
Runtu waxay tahay in imtixaanku yahay jimicsi sahamin. Tijaabadu waxay ubaahantahay aqoon domain, maskax diirada saarantahay iyo rabitaanka barashada arjiga.
Imtixaanka ma aha oo kaliya dilka go'an tallaabooyinka imtixaanka pre-qeexay iyo is barbar natiijada dhabta ah natiijada laga filayaa. Tani waa shaqada jeegaga otomatiga ah.
Si habboon loo tijaabiyo arjiga, caqliga aadanaha ayaa had iyo jeer loo baahan yahay.
Xalka: Fahmaan in loo gaarsiiyo guul ah mashruuc aad u baahan tahay baaritaanka iswada iyo buuga labadaba.
Mid ka mid ahi ma beddelayo midka kale; ku dhammaystiraan jeegaga otomaatiga ah ee gacanta / baaritaanka baaritaanka.
Waqtiga Dayactirka iyo Dadaalka
Waa inaad aqbashaa xaqiiqda ah in tijaabooyinka otomaatigga ahi u baahan yihiin dayactir. Maaddaama dalabka tijaabada uu isbeddelayo, sidaas oo kale waa in jeegagga otomaatigga ah.
Jeegaga otomaatigga ah ayaa gaagaaban. Haddii baakad dhaca aan la dhawray taariikhda, aad bilowdo maxaa yeelay, dhammaan noocyada kala duwan ee fashilaad.
Waxaa laga yaabaa in jeegagga qaarkood aysan hadda khusayn. Ama waxaa laga yaabaa in hubinta aysan ahayn matalaad dhab ah oo ku saabsan hirgelinta cusub.
Guuldarrooyinkan ayaa wasakheyn kara natiijooyinka baaritaanka.
Canshuuraha otomaatiga tijaabada ah maahan dadaal hal mar ah. Si aad u hesho baxay inta badan jeeg iswada, waxay leeyihiin in la sii hayo ilaa iyo maalinta la xiriira. Tan, waxay u baahan tahay waqti badan, dadaal iyo kheyraad.
Xalka: Maxaa yeelay, factor dayactirka waa hawl joogto ah, waqti aad ku dhigaayo qaab wanaagsan. Isticmaal modules karo, imtixaanada ka dhismeedka kala oo ay isticmaalaan mabaadi'da design wanaagsan si loo yareeyo dadaal dayactirka.
Jawaab gaabis ah
Marka shaqeynayaan ah ayaa diyaar u ah inay tijaabiso, wakhtiga intiisa badan waxa ay dhakhso waa inaan sameeyo jeeg buuga.
dhibaatada la, jeegaga iswada si script qaadan kartaa waqti dheer ku xiran kakanaanta imtixaanka. Sidaa darteed, samaynaya baaritaan gacanta ku siinayaa jawaab-celin dhakhso badan scripting, iyagoo ordaya oo hubinta natiijooyinka.
Sidoo kale, marka la eego baaritaanka heerka UI iyo System, jeegaga iswada qaadan kartaa waqti dheer si uu u dhameystiro iyo warbixin. Sidaa darteed, haddii ay jiraan waa cayayaanka dhab ah, ma laga yaabaa in aan ka war ilaa dhammaan baaritaanyada ku dhammeeyaan.
Xalka: Isku day inaad qalabayn imtixaanada garab horumarinta si marka horumarinta dhamaato, waxaad la socon kartaa imtixaanada ka gees ah ka shaqeynayaan cusub iswada.
Sidoo kale, kala saar jeegaga otomaatiga ah ee xirmooyinka kala duwan.
Xidhmada dib u celinta qiiqu waa inay ahaataa mid dhakhso badan. Imtixaannadu waa inay hubiyaan oo keliya in arjiga la bilaabi karo lana heli karo.
Marka xigta, waxaad heli kartaa xirmo dib-u-dhac shaqeynaya oo hubinaya shaqooyinka waaweyn.
pack kale oo dhaca waxaa ka mid ah oo dhan imtixaanada iyo tijaabooyinka qoto-dheer-ilaa dhamaadkii. Jeegagan waxaa lagu shaqeyn karaa habeenki.
Tusaale ka mid ah baxsad ah habeen kasta waa jeegag cross-browser iswada. Kuwani caadi ahaan waxay qaataan waqti dheer in ay ku shaqeeyaan dhammaan daalacashada.
Khaladaad badan lama helin
Badida dhiqlaha u muuqdaan in ay laga heli by 'shil' ama marka fulinta baaritaanka iyo sahaminta.
Tani waa laga yaabaa sababta oo ah in kulan kasta baaritaanka iyo sahaminta, waxaan laga yaabaa in jirrabaya codsiga siyaabo kala duwan.
Hubinta dib u soo celinta otomaatiga ah dhinaca kale, marwalba raac waddo la siiyay. Mararka qaarkood isla xogta imtixaanka oo isku mid ah. Tani waxay yaraynaysaa fursadda helitaanka cilladaha cusub ee arjiga.
Sidoo kale tirada cayayaanka dhaca u muuqdaan in ay noqon ka hooseeya cayayaanka cusub-feature.
Xalka: Iskuday inaad kadis ku sameyso xaalada iyo xogta. Isku dayida wadiiqooyin kala geddisan oo leh xog kala duwan mar kasta waxay daaha ka qaadi kartaa arrimaha iman kara.
In this post, waxaan eegay qaar ka mid ah faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka imtixaanka iswada. Markii aan ku lug baaritaano automating, waa in aan tixgelin doonna qodobada kor ku xusan si aad u hesho lacagta ugu badan.
amar Linux ah in la taxo faylasha
Liiska amarada sql tusaale ahaan
xogta laga soosaaray Python faylka json
Tijaabinta DevOps World
Sida Loo Sameeyo Fayl Ku Meel Gaarka ah Java
4 talaabo oo lagu maareeyo xogta baaritaankaaga
Furan Qalabka Maareynta Imtixaanka
Waa maxay xafladaha Scrum ee Agile?
12 Astaamaha Hogaamiyaha Dhaqdhaqaaqa Wanaagsan
Takoorida - Sida Loo Badbaadiyo Jawabta
CEH v10 - Qoritaanka Daraasada Imtixaanka Kadib
Bayaan Hadal-Haddii Kale Tusaalooyin
Tijaabinta Qalabka Aaladda otomaatiga ee Tijaabinta Codsiyada ReactJS